TMLT အယ်ဒီတာများ၊ လက်ရှိကျောင်းသတင်းများမှစာရေးသူ - လက်ရှိကျောင်းသတင်း
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများ Portal၊ စာမေးပွဲနှင့်ပညာရေးလမ်းညွှန်၊ လခကောင်းသောအလုပ်များနှင့်ပညာသင်ဆုဝက်ဘ်ဆိုက်
ကြော်ငြာများ IJMB / JUPEB မှတစ်ဆင့်သင်ရွေးချယ်သောမည်သည့်တက္ကသိုလ်တွင်မဆိုမည်သည့်သင်တန်းကိုမဆိုတက်ရောက်ရန်အဆင့် ၂၀၀ လက်ခံမှုကိုရယူပါ။ အမှားမရှိ | အနိမ့်အခကြေးငွေ။ တိုးတက်မှုအတွက်မှတ်ပုံတင်။ 07063900993 NOW!
ဇူလိုင် 2021 ချစ်စရာကောင်းတဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေညီအစ်မကသူတို့ကိုအံ့အားသင့်စေပါလိမ့်မယ်
အတွက် Filed ပြောဆိုမည့်အကြောင်းအရာ [Message], စြေးထား by TMLT တည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင်လ 23, 2021 အပေါ်
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေညီအစ်မကိုးကား - ညီအစ်မတစ် ဦး သည်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း၊ သင်၏အကောင်းဆုံးအဖော်နှင့်ဖခင်တစ် ဦး အနေနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင့်တွင်အစ်မတစ် ဦး သို့မဟုတ်ယောက္ခမရှိပြီး၎င်းသည်သူမ၏မွေးနေ့ဖြစ်ပါကချစ်စရာကောင်းသောချိုမြိန်သောမွေးနေ့အစ်မကိုးကားချက်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုသူမကိုအံ့အားသင့်စေလိုသည်။ အစ်မရှိခြင်း […]
အတွက် Filed အလုပ် by TMLT တည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင်လ 23, 2021 အပေါ်
www.immigration.gov.ng/recruitment ပုံစံ ၂၀၂၁ - နိုင်ဂျီးရီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုသည် ၂၀၂၁ အစည်းအဝေးလျှောက်ထားသူများအတွက်စုဆောင်းမှုကိုအောင်မြင်စွာစတင်ခဲ့သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင် NIS မှကြေငြာသောလက်ရှိရာထူးများအတွက်မည်သို့လျှောက်ထားနိုင်မည်နည်းနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယားရှိဘွဲ့ရများနှင့်ဘွဲ့လွန်သူများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက်အကြောင်းကြားစာများမည်သို့ရရှိနိုင်ပုံကိုလမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မည်။ နိုင်ဂျီးရီးယားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနသည်အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်။
www.nouonline.net ရလဒ် - 2021 National Open University Result Checker
အတွက် Filed ကျောင်းသတင်း by TMLT တည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင်လ 23, 2021 အပေါ်
အောက်ပါအချက်အလက်သည် www.nouonline.net ရလဒ်လင့်ခ်ကို လိုက်၍ National Open University ရလဒ်စစ်ဆေးသူ 2021 ကိုအသုံးပြုနိုင်သည့်လမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များသည်အခြားမည်သည့်ပုံစံမျှမပါဘဲသင်၏ရလဒ်ကိုစစ်ဆေးနိုင်စေရန်အလို့ငှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ရှင်းလင်းစွာသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သေချာအောင်လုပ်လိမ့်မည်။
ဇူလိုင် ၂၀၂၁ သင်၏နေ့ကိုစတင်ရန်ကောင်းသောနံနက်ခင်းများနှင့်စာသားများကိုဆွဲဆောင်ခြင်း
အတွက် Filed ပြောဆိုမည့်အကြောင်းအရာ [Message] by TMLT တည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင်လ 23, 2021 အပေါ်
သင်၏ချစ်သူ၊ မိန်းကလေး၊ ခင်ပွန်း၊ ဇနီး၊ မိသားစုဝင်သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းထံသို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကသင့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုနက်နက်နဲနဲသိစေပြီးနံနက်ခင်းသတင်းစကားကိုပြောပြခြင်းဖြင့်တစ်နေ့တာရဲ့နေ့ရက်ကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။ ဤစာများသည်သင်၏ခံစားချက်များကိုအပြည့်အ ၀ ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်သည်အာကာသထဲတွင်ရှိနေပြီလား အမေဇုံကနေ NASA အထိ
အတွက် Filed သူနာပြုသတင်းများ, နည်းပညာ by TMLT တည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင်လ 22, 2021 အပေါ်
ဒီတော့ Elon Musk သည် ET တွေ့ဆုံရန်မျှော်လင့်ချက်ရှိသောတစ်ခုတည်းသောစူပါဘီလျံနာတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင် Jeff Bezos သည်အာကာသထဲသို့ရောက်ရှိနေပြီးကမ္ဘာအနှံ့ခရီးသွားပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။ Jeff Bezos ကဘယ်သူလဲ။ ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး Amazon ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ၏တည်ထောင်သူနှင့်စီအီးအို […]
ဇူလိုင် 2021 Funny မွေးနေ့ Wishes, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ကိုးကား
အတွက် Filed သူနာပြုသတင်းများ by TMLT တည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင်လ 22, 2021 အပေါ်
Afteracycle of time beginning from few seconds to minutes to hours, then to days, weeks and months, we come back to the very start. The start we are discussing here is that blessed moment when we were introduced into this world. Understandably, July 2021 birthday wishes are apt in celebrating the lives of […]
Anorexic Fast ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ (အကြောင်းရင်းများ၊ ကုသခြင်းနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ)
အတွက် Filed ဆောင်းပါးများ by TMLT တည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင်လ 22, 2021 အပေါ်
Anorexic ဖြစ်လာနည်း Anorexic ဖြစ်လာခြင်းသည်မည်သူမဆိုကြုံတွေ့ရနိုင်သောအရာဖြစ်ပြီးကိုယ်အလေးချိန်နည်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပြန်လည်ရရှိရန်ကြိုးစားသော်လည်း Anorexic ဖြစ်လာရန်မသတိထားပါနှင့်။ ဤဆောင်းပါးတွင်အချိန်တိုအတွင်း, အကြောင်းတရားများ, ဆိုင်းဘုတ်များနှင့် […] ကာလအတွင်း anorexic ဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုသင်သိရန်လိုအပ်သမျှပါဝင်သည်။
Fullmetal Alchemist နှင့် Brotherhood အကြားခြားနားချက်များ
အတွက် Filed ပညာရေး by TMLT တည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင်လ 22, 2021 အပေါ်
Fullmetal Alchemist နှင့် Brotherhood အကြားခြားနားချက် - Fullmetal Alchemist သည်ဂျပန်shōnen manga စီးရီးဖြစ်ပြီး Hiromu Arakawa မှရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီး Brotherhood သည် Bones မှထုတ်လုပ်သောဂျပန် anime ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးဖြစ်သည်။ စီးရီးနှစ်ခုစလုံးအကြားအဓိကကွာခြားချက်မှာ Brotherhood သည် Fullmetal Alchemist နှင့်လိုက်ဖက်သည်။ နှစ်ခုစလုံးကိုအကြီးမြတ်ဆုံး manga တစ်ခုမှရရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏သတင်းစကားများသည်အစိမ်းရောင်ဖြစ်သနည်း။ ကျွန်ုပ်၏စာသားသတင်းစကားများသည်အဘယ်ကြောင့်အစိမ်းရောင်ဖြစ်နေရသနည်း။ သင် Apple ၏ iMessage နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေသင်၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုအပြာရောင်ဖြင့်ပို့လိမ့်မည်။ သင်တိုတောင်းသောစာတိုပေးပို့ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖြစ်စေ၊ SMS (ဖြစ်စေ) နည်းလမ်းကိုသုံးသည်ဖြစ်စေစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများသည်အစိမ်းရောင်ရှိလိမ့်မည်။ iPhone message app မှထွက်လာသော message bubble […]
2021 ခုနှစ်တွင်စတင်ရန်လွယ်ကူသောဆေးသမားလက်ထောက် PA ကျောင်းများ
အတွက် Filed ကျောင်းသတင်း by TMLT တည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင်လ 22, 2021 အပေါ်
PA ထဲဝင်ရန်အလွယ်ဆုံး PA ကျောင်းများ - သုတေသနပြုချက်အရဆေးပညာကျောင်းသို့တက်ရန်မှာအလွန်ခက်ခဲကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဆရာဝန်လက်ထောက်ကျောင်း (PA) ကျောင်းသို့တက်ရန်လိုအပ်သောစံနှုန်းများနှင့်ပြည့်စုံစွာတွေ့ဆုံခြင်းသည်အလွန်ပင်ခက်ခဲနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆရာဝန်လက်ထောက်ဘွဲ့ရအစီအစဉ်ကိုသင်စိတ်ဝင်စားလိုပါကကောင်းမွန်သောဘွဲ့ကြို GPA မရှိပါက၊ […]
Standard Chartered ဘဏ်စုဆောင်းမှု 2021/2022 လျှောက်လွှာ Portal ကို
Standard Chartered ဘဏ်နိုင်ဂျီးရီးယားလူသစ်စုဆောင်းမှု Portal 2021 www.sc.com
ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်စုဆောင်းမှု 2021/2022 လျှောက်လွှာပုံစံ Portal
ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်အလုပ် Portal 2021 www1.wfp.org
ကိုလံဘီယာအစိုးရ၏မဟာသိပ္ပံနှင့်ပါရဂူဘွဲ့များ 2021/2022 နောက်ဆုံးအခြေအနေများ
Vanier Canada ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားများအတွက် ၂၀၂၁ ပညာသင်ဆု
Exeter 2021 တက္ကသိုလ်မှ Global Excellence Scholarship
ExxonMobil ဘွဲ့လွန်ဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှု 2021 အပ်ဒိတ်များအတွက်ယခုလျှောက်ထားပါ
ExxonMobil စုဆောင်းမှု 2021/2022 လျှောက်လွှာစစ်ဆေးမှုလျှောက်လွှာ Update ကိုစစ်ဆေးပါ
ExxonMobil နိုင်ဂျီးရီးယားလူသစ်စုဆောင်းမှု 2021/2022 နောက်ဆုံးထွက် Application အသစ်များ
ExxonMobil ဘွဲ့လွန်စုဆောင်းမှု Portal 2021 www.corporate.exxonmobil.com
နိုင်ဂျီးရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့စုဆောင်းမှု 2021 Update ကိုလျှောက်လွှာ Jobs Update များ
2021/2022 လျှောက်လွှာပုံစံ Portal ကို DPR စုဆောင်းမှု www.dpr.gov.ng
UNIUYO SCE ၂၀၁၁၊
© 2021 လက်ရှိကျောင်းသတင်း။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး..